Izitshixo zeBitbucket kunye ne-SSH > UVielhuber uDavid
Izitshixo zeBitbucket kunye ne-SSH01
Umboneleli weBitbucket akaboneleli (nkqu nakwimirhumo esekwe kwimirhumo kunye nePremiyamu) ukubakho kokugcina amaqhosha e-SSH ngamalungelo okubhala kwinqanaba lokugcina. Ukugcina isitshixo sakho sobuqu kwi-server yemveliso ayisiyiyo inketho, kungenjalo unokufikelela kuzo zonke ezinye iiprojekthi osebenza kuzo ngoku ukusuka apho. Kukho okubizwa ngokuba ngamaqhosha okufikelela , kodwa ezi zivumela kuphela amalungelo okufunda.
Ke ukuba uphuhlisa apha ekuhlaleni kwiprojekthi kwaye udibanise le ndawo yokugcina imveliso kwiserver enofikelelo lokubhala, zimbini iindlela onokukhetha kuzo: Nokuba ungazenzela owakho umsebenzisi (onelayisensi kunye nabasebenzisi aba-5 okanye nangaphezulu) ngale njongo, okanye ungayisebenzisa ukuhanjiswa kwearhente ye-SSH engaziwayo.
Ngale nkqubo, unokuphinda usebenzise isitshixo sakho sendawo ye-SSH kwiseva ekude kwiseshoni yangoku ngaphandle kokugcina ngokusisigxina isitshixo apho. Ukuseta kulula: Okokuqala, uyaqinisekisa ukuba unokunxibelelana ngqo neseva ekude kunye neBitbucket usebenzisa isitshixo sakho se-SSH. Emva koko qalisa iarhente ye- SSH kumatshini wakho wasekhaya nge- eval `ssh-agent -s` kwaye ugcine isitshixo sakho sangoku nge- ssh-add -k . Ngokudluliselwa kwe-arhente kusebenze, ngoku unganxibelelana neseva ekude nge- ssh -Igama lomsebenzisi @ host1 kwaye emva koko ungene kwindawo yokugcina yeBitbucket ngaphandle kokufaka isitshixo se-SSH esikude.
Enye indlela kukutshintshela kumnikezeli owahluke ngokupheleleyo: GitLab, umzekelo, sele inikezela nge-quota ye-10 GB (xa kuthelekiswa ne-2 GB kunye neBitbucket), inani elingenamda lamalungu eqela kunye nezinto ezibizwa ngokuba zihambisa izitshixo kwirhafu yasimahla. Oku kuthetha ukuba naliphi na inani lamaqhosha e-SSH ongezelelweyo (o.k.t. evela kwiseva yemveliso) anokugcinwa kwindawo nganye yokugcina izinto, enika ukufikelela ekubhaleni kwindawo yokugcina izinto.